ALIA BHATT အသက်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး
Alia Bhatt အသက်၊ အမြင့်၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊
နာမည်အမှန် Alia Bhatt
မီတာအတွက် - 1.60 မီတာ
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 33-26-34
မွေးနေ့ မတ်လ ၁၅ ရက်၊
ခေတ် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၂၇ နှစ်
နိုင်ငံသား ဗြိတိသျှ  Hindustan Times သတင်းစာ
ကျောင်း မွန်ဘိုင်း Jamnabai Narsee ကျောင်း
အချစ် ရုပ်ရှင် (ကလေးအဆိုတော်) Sangharsh (1999)
ရုပ်ရှင် (ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္)): တစ်နှစ်တာ၏ကျောင်းသား (2012)
ပြန်ဖွင့်အဆိုတော်: Sooha Saha; Song- ရုပ်ရှင် - အဝေးပြေး (၂၀၁၄)
ဇာတ် / လူမျိုးစု ဂူဂျာရသီ (ဖခင်ဘက်)၊ ကကျရျှမီရီ & ဂျာမန် (မိခင်ဘက်)
အစားအစာအလေ့အထ သက်သတ်လွတ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သက်သတ်လွတ်စားခဲ့သည်)
လိပ်စာ ၂၀၅၊ Silver Beach Apartments၊ B Wing၊ အေခနာရီးလမ်း၊ တည်းခိုခန်းဟိုတယ်ဘေးတွင်၊ ဂျဟူ၊ မွန်ဘိုင်း၊ မဟာရပ်ရှ၊ အိန္ဒိယ
မှတ်စု: သူမ၏အိမ်အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်; ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ဝါသနာ သီချင်းဆိုခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ စန္ဒရားတီးခြင်း
Likes & မကြိုက်ဘူး Likes: လက်ချောင်းများကိုအနံ့ခံနေခြင်း၊ (အိပ်နေစဉ်) လေ့လာခြင်း၊ လက်ဝှေ့သမားကစားခြင်း၊ ၁၂-၁၄ နာရီဆက်တိုက်အိပ်စက်ခြင်း
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ ၂၀၁၃ ခုနှစ် Times of India Film Awards မှသူမသည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုဖြစ်သည်
၂၀၁၅ အဝေးပြေးလမ်းမအတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအတွက် Filmfare ဝေဖန်သူများဆု
2017: Udta Punjab အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆု
2017: Forbes 30 တွင်အာရှ ၃၀ အောက်၌စာရင်းသွင်းထားသည်
Tattoo သူမ၏လည်ပင်း၏နောက်ဘက်ရှိဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် Pataka ဟူ၍ ရေးထားသည်
အငြင်းပွားမှုများ • ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူသည် Uttar Pradesh ၏ Saifai ကျေးရွာ (Samajwadi ပါတီမှစီစဉ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Saifai Mahotsava) တွင်သာမန်ထက်ထူးကဲသောလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Muzzafarnagar အဓိကရုဏ်းသည် Uttar Pradesh တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအရသတိမထားမိသောကြောင့်နောင်တရမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
• 'Koffee With Karan' စကားပြောခန်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်သူသည်အထွေထွေအသိပညာမရှိခြင်းကြောင့်သူမအား ၀ မ်းသာအားရဖြစ်ပြီး 'Brain without Brains' ဟုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ နှင့်အတူ featuring တစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲ၌တည်၏ Sidharth malhotra နှင့် Varun Dhawan သူမက Prithviraj Chauhan ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယသမ္မတကသူမေးသောအခါ!
သူမနာမည်ကိုလည်း AIB Roast Scandal တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ F.I.R. တစ်ခု သူမကိုလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။
•နီပိုတစ်စန်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အတွက်သူမအားပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားရသည်။ နောက်မှ Sushant Singh က rajput ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သည် Karan Johar , Ekta Kapoor , Sanjay Leela Bhansali နှင့် Salman Khan က ထို့အပြင်ဘောလီးဝုဒ်တွင်နီပိုတစ်စန်ကိုမြှင့်တင်မှုအတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည့်အခြားသူများထဲတွင်လည်းပါဝင်သည်။ [နှစ်ခု] အဆိုပါပုံနှိပ်
ရေးရာ / ရည်းစား Ramesh Dubey (ကလေးဘဝရည်းစား၊ အတန်း ၆)
• Ali Dadarkar (ကလေးဘဝရည်းစား၊ အတန်း ၈)
Varun Dhawan (သရုပ်ဆောင်၊ ကောလာဟလ)
• Kavin မစ်တယ် (စီးပွားရေးသမား၊ ကောလာဟလ)
• Sidharth Malhotra (သရုပ်ဆောင်)
• Ranbir Kapoor က (မင်းသား)
မိဘများ ဖခင် - Mahesh bhatt (ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ)
အမေ - Soni Razdan (မင်းသမီး၊ ဒါရိုက်တာ)
မောင်နှမများ အစ်ကို - Rahul Bhatt (step-brother; ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာ)
အစ်မ (များ) - Pooja Bhatt (နှမဝက်), Shaheen Bhatt (အသက်ကြီး)
ဝမ်းကွဲ (များ) Emraan Hashmi နှင့် Mohit suri (နှစ် ဦး စလုံးသူမ၏မိခင်ဝမ်းကွဲများမှာ)
အစားအစာ ငါး၊ Ragi Chips၊ ပြင်သစ်ကြော်၊ Rasgulla, Dahi-Chawal, Moong Dal Halwa
သရုပ်ဆောင် (များ) ဘောလီဝုဒ်: Shah Rukh Khan , Ranbir Kapoor က, Govinda
ဟောလိဝုဒ် Leonardo Dicaprio
မင်းသမီး ဘောလီဝုဒ်: Kareena Kapoor , Kangana ranaut
ရုပ်ရှင် အစက်မရှိသောစိတ်၏ထာဝရနေရောင်ခြည် (2004)
ဂီတပညာရှင် အေ R. Rahman က
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Sooraj Barjatya, Karan Johar
ဖက်ရှင်တံဆိပ် (များ) Topshop နှင့်မြစ်ကျွန်း
ရေမွှေး / အနံ့ Bleu de Chanel (သူမသည်အမွှေးနံ့သာများကိုနှစ်သက်သည်)
စားသောက်ဆိုင် မွန်ဘိုင်းအတွက် Ellipsis
စာအုပ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်များတွင်ပြသနာ John Green မှ
သီချင်း ဆမ်စမစ်မှ 'ကျွန်ုပ်၏စိတ်တွင်ငွေ'
ဦး တည်ရာ (များ) Himachal Pradesh, လန်ဒန်
ကား (များ) စုဆောင်းခြင်း • Land Rover Range Rover Vogue
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး ၁၀ ကုcroေ / ရုပ်ရှင် (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့)  နေခြည်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး ၂၅ ကုreေ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့)  နေခြည်
charan အသစ်ကရုပ်ရှင် Hindi ram ram
Alia Bhatt အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Alia Bhatt သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
Alia ကိုဂူဂျာရသီ - ဟိန္ဒူဖခင်နှင့်ကက်စမီးရီ - ဂျာမန် - မွတ်စလင်မိခင်မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူမအသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာမင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူမသည်ပထမ ဦး ဆုံး 'Sanghrash' ရုပ်ရှင် (၁၉၉၉) တွင်ကလေးဘဝအနုပညာရှင်အဖြစ်မြင်ခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင် Akshay Kumar နှင့် Preity Zinta သူမအငယ် Preity Zinta တီးခတ်ခဲ့သည်။
Sangharsh ရုပ်ရှင်တွင် Alia Bhatt
malaika arora အမြင့်
သူမ၏ဖခင် Mahesh Bhatt မှသူမ၏ပထမဆုံးသောရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးရန်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ရန်သူမဘယ်တုန်းကမှမတောင်းဆိုခဲ့ပါ။
သူမအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင် Ranbir Kapoor နှင့်အတူ Balika Vadhu ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကသူမသည်အဝလွန်ခဲ့ဖူးသော်လည်းသူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ရုပ်ရှင် (၂၀၁၂) တွင်အောင်မြင်ကျော်ကြားရန် ၁၆ ကီလိုဂရမ်ခန့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး သည်တင်းကျပ်သောအစားအစာအောက်တွင် ၃ လကြာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်။
ထို့နောက်နှင့်ယခု Alia Bhatt
သူမသည် 'the the Year of the Year' တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ to မှရရှိရန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းခံရသည့်မိန်းကလေး ၄၀၀ ကိုရိုက်နှက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူမသည်အဆိုတော်ဖြစ်လာပြီး Sooha Saaha; ရုပ်ရှင်ထဲတွင်တေးသံ '' အဝေးပြေး။ '
သူမသည်တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး PETA အတွက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာများတိုးပွားစေရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
Alia Bhatt - ပီတာ
ကန်နာဒါအတွက်ဟူး dravid သတင်းအချက်အလက်များ
Alia သည်အမှောင်ကိုကြောက်။ အလင်းရောင်နှင့်အတူညအချိန်တွင်သူအိပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Alia Bhatt မီးထွန်း။ အိပ်စက်သည်
သူမဟာပျင်းရိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၂ နာရီကျော်လမ်းလျှောက်ရင်းအိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။
သူမသည်ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည် Ranbir Kapoor က သူမသည် ၁၁ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမအပေါ်၌စိတ်သောကရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Kapil Sharma ပြပွဲ၏ဇာတ်ကောင်
aamir Khan နှင့် Hina Khan
ab de villiers ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း
apj abdul kalam မိဘများအမည်
junaid khan aamir khan ရဲ့သား
မွေးဖွား၏ rimi tomy နေ့စွဲ